Uncategorized – Update Nepal
सुर्खेतमा थप दुई हप्ता निषेधाज्ञा बढाइयो !
May 14, 2021 adminLeaveaComment on सुर्खेतमा थप दुई हप्ता निषेधाज्ञा बढाइयो !
सुर्खेत – सुर्खेतमा थप दुई हप्ता निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार शुक्रबार रातीदेखि लागुहुने गरी थप दुई हप्ता निषेधाज्ञा लागु गर्ने तयारी गरिएको हो । यसअघि लागु भएको निषेधाज्ञाको अन्तिम मिति भोली सकिदैछ । यसअघि लागु भएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा स्थानीयले ख्याल ठट्टा गर्न थालेपछि अब लागुहुने निषेधाज्ञा अवधिमा प्रशासन थप […]
कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन २२५ जनाको मृत्यु !
May 11, 2021 adminLeaveaComment on कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन २२५ जनाको मृत्यु !
मंगलबार २८ वैशाख २०७८ काठमाडौं – कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकै दिनमा २२५ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपाली सेनाले २२५ जनाको शव व्यवस्थापन गरेको छ । यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या ४ हजार ८४ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २१ हजार ३१६ नमुना परीक्षणमा ९४८३ […]
कोलहपुरमा पीसीआर रिपोर्ट कुर्दाकुर्दै अस्पताल प्रांगणमै गयो ज्यान !
May 7, 2021 May 7, 2021 adminLeaveaComment on कोलहपुरमा पीसीआर रिपोर्ट कुर्दाकुर्दै अस्पताल प्रांगणमै गयो ज्यान !
बाँके – कोहलपुर नगरपालिका -५ का ५९ वर्षीय पुरुषको पीसीआर रिपोर्ट कुर्दाकुर्दै अस्पतालमा ज्यान गएको छ । शुक्रबार ३ बजेतिर नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोलहपुरमा परिवारले बिरामी ल्याएर अस्पताल प्रांगणमा पीसीआर रिपोर्ट पर्खेका थिए । पीसीआर कुर्दाकुर्दै बिरामीको मृत्यु भएपछि आफन्तीले रिक्सामा राखेर कालो प्लास्टिकले बेरेर श’व घर लगेको तस्बिर कोहलपुर मेडिकल कलेज नेपालगन्जका डा. देवेन्द्र आचार्यले […]